Madaxweynaha Myanmar iyo Erdogan oo wada hadlay | Caasimada Online
Madaxweynaha Myanmar iyo Erdogan oo wada hadlay
Hoggaamiyaha Myanmar, Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in akhbaaraad been abuur ah laga faafinayo rabshadaha ka socda gobolka Rakhine ee dalkaas, kuwaas oo 125,000 oo ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya ku qasbay inay u qaxaan dalka deriska ah ee Bangladesh.
Bayaan ay soo dhigtay facebook ayay ku sheegtay inay ra’iisul wasaaraha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan kala hadashay xasaraddan.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in Aung San Suu Kyi ay Erdogan kala hadashay sawirro uu twitter soo dhigay ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga, oo muujinaya meydadka Rohingya, kuwaasi oo markii dambe la sheegay inaysan la xiriirin rabshadaha hadda socda.
Ugu yaraan 400 oo qof ayaa la dilay tan iyo markii koox isku magacwoday Arakan Rohingya Salvation Army ay weeraro ku billaabeen xarumaha booliska ee gobolka Rakhine, oo ah gobolka ay ugu badan yihiin buslshada Rohingya.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga ayaa horkacaya hogaamiyayaal caalami ah oo Aung San Suu Kyi ugu baaqaya inay soo geba gebeyso rabshadaha ka dhanka ah dadka Rohingya.
Dadka Rohingya ayaa ah muslimiin asal ahaan kasoo jeeda dalka Bangladesh, oo ku nool dalka ay ku badan yihiin dadka haysta diinta Buddhist ee Myanmar, waana dad la takooro oo xitaa aan loo ogoleyn muwaadannimada dalka.